Liverpool oo ku dhow inay ku xoojiso safkeeda kooxda xiddig ka tirsan Atletico Madrid – Gool FM
Liverpool oo ku dhow inay ku xoojiso safkeeda kooxda xiddig ka tirsan Atletico Madrid
(Liverpool) 09 Luulyo 2021. Maamulka Liverpool ayaa raadinaya inta lagu jiro mudada soo socota in la xoojiyo safka kooxda inta lagu jiro xilli ciyaareedka cusub, ha ahaato Horyaalka Premier League ama Champions League.
Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England Liverpool ayaa hoggaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga kooxda Atletico Madrid Saúl Ñíguez xagaagan.
Warbixinta oo soo xiganeysa ilo Spain ah, ayaa lagu sheegay in maamulka RojiBlancos uu doonayo inuu maqlo dalabyo u dhexeeya 40 million euros (35 million pounds) xagaagan.
Wargeyska Ingariiska ayaa sidoo kale tilmaamay in Saúl Ñíguez uu ka helay xulasho liidata liiska xiddigaha uu doorbidayo tababare Diego Simeone, waxaana kahoreeya dhammaan xiddigaha khadka dhexe ee Koke, Thomas Lemar iyo Marcos Llorente.
Liverpool ayaa dhawaan lumisay adeega Georginio Wijnaldum, oo qandaraaskiisa kooxda uu dhacay, kaasoo si rasmi ah ugu biiray Paris Saint-Germain si uu khibrad cusub uga helo Horyaalka Faransiiska.
Saúl Ñíguez waa 26 jir, wuxuuna tan iyo markii uu u dhaqaaqay Atletico Madrid sanadii 2014 ku ciyaaray maaliyada RojiBlancos 337 kulan tartamada oo dhan, wuxuu u dhaliyay 43 gool wuxuuna ka caawiyay saaxiibadiis 19 gool.
Neymar oo si kulul ula hadlay taageerayaasha Lionel Messi kahor final-ka Brazil iyo Argentina